Kutongwa kweMupurisa Ari Kupomerwa Mhosva yeKuuraya George Floyd Kotanga muMinnesota
Kurume 10, 2021
Kusarudzwa kwevanhu vachanzwa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa Derek Chauvin, mupurisa anonzi akauraya gore rapera munhu mutema muAmerica, VaGeorge Floyd, kwakatanga muguta reMinneapolis nezuro, Chipiri.
Zviuru zvemauto nemapurisa zvakange zvakazara muguta iri zvichityira kuti pangaita mhirizhonga seyakawonekwa gore rapera pakafa Va Floyd.
Gore rapera vanhu vazhinji pasi rose vakaona mavhidhiyo emupurisa wechichena, Derek Chauvin, akatsimbirira neibvi rake pahuro paVaFloyd kusvika vafa.
Izvi zvakakonzera mhirizhonga nekupiswa kwedzimba nemabhizimisi mumaguta mazhinji muAmerica.
Vanhu vemunyika dzakasiyana siyana vakaratidzirawo vachishora zverusarura ganda zviru kuitika muAmerica.
Kusarudzwa kwevanhu vachanzwa nyaya iyi, kana kuti ‘jury’, kunonzi kunogona kutora masvondo matatu.
Vanoongorora zvematongerwo enyika, VaCalvin Manduna, vanoti nyaya iyi inyaya yakamirirwa nevanhu vazhinji pasi pose, vachiti haasi Chauvin ega ari kutongwa asi kuti mapurisa anoitawo rusarura pamwe nemitemo yemuAmerica zvichatarisiswa.